🥇 ▷ Sida loo badbaadiyo batteriga taleefanka casriga ah ee Android? ✅
Sida loo badbaadiyo batteriga taleefanka casriga ah ee Android?
Sida loo badbaadiyo batteriga taleefanka casriga ah ee Android? – Dhibaatada weyn ee taleefannada casriga casriga, waa waqtiga ay wax ka qaban karaan iyagoo lala xiriirinayo hal lacag… Waa run in tikniyoolajiyaddu ay soo mareen sanadihii ugu dambeeyay, halkaas oo aan ku dari karno tikniyoolajiyadda batteriga ee casriga ah. Si kastaba ha noqotee, waxay weli tahay ciribta Achilles oo dhab ah, taas oo ah inay si weyn u fiicnaato marka soo-saareyaashu bilaabaan inay la ciyaaraan Graphene.
Wax kasta oo aan caawinayn xafladda, midkoodna, wuxuu ahaa in baytariyada laga saari karo ay ahaayeen wax u gaar ah taleefannada casriga hore. Jid ahaan, waqti aan fog ayaan qoray maqaal, halkaas oo aan ku sharxay sababaha kala duwan ee aan hadda dambe ugu jirin taleefannada casriga ah ee leh naqshaddan suuqa.
Taasi waxay tidhi, wali waa caadi in la arko telefoonada casriga ah si ay u dhintaan ayaga oo aan batari badhtamaha maalinta. Gaar ahaan markaan ka hadlayno aalad 2 sano jir ah ama ka weyn. Hadana maya… Powerbanks xalka ma ahan, iska ilow taas.
Weli, waxaa jira waxyaabo dhowr ah oo aad sameyn karto si aad u wanaajiso nolosha batteriga ee taleefankaaga casriga ah. Haddaba fiiri:
1. Daar aaladda ‘ada ada Battery’ iyo ‘Ada Ada Iftiin’
Labadan qaab ayaa loogu talagalay inay kordhiyaan madax-bannaanida taleefankaaga casriga ah. Adeegsiga AI si aad u fahanto sida aad u isticmaasho aaladdaada, oo aad markaa ula qabsato howlaha qaar qaabkaaga iyo caadooyinkaaga. Fikradda ayaa ah in bateriga la isticmaalo oo keliya marka loo baahdo. (Caadi ahaan waxaa loo rogaa si caadi ah, laakiin had iyo jeer waa u qalmaan in la hubiyo)
2. Fahmaan sida ay labo iyo tobanka qaab u shaqeeyaan
Android 6.0 waxay la timid muuqaal aad u xiiso badan oo cusub si ay isugu dayaan inaad keydiyaan batariga markii aadan isticmaaleynin taleefankaaga casriga. Laakiin waxa runtii arxan darradu tahay inaadan u baahnayn inaad wax samayso!
Hab laba iyo toban ah ayaa si otomaatig ah u shaqeynaya markii taleefanka casriga ah uu shaqeynayo wakhti qadaysan. Sidaa darteed waa waqtigan in barnaamijyada asalka u leeyihiin shaqadooda xaddidan. (Helitaan shabakad xaddidan, howlo la joojiyay, iwm.)
Tani waa sababta aan u leeyahay micno malahan in la xidho codsiyada… Android lafteeda ayaa si toos ah u maareysa kheyraadkeeda. Hadana waxay noqoneysaa inay had iyo jeer kasii xumaato batteriga, xirida iyo dib u furista barnaamijyada marar badan.
3. Codsiyada Keydinta Beytariga
Halkan waa inaad taxaddar muujiso! Waxa aan ka maqnayn PlayStore, waa dalabyo ballan qaadaya inay kordhinayaan nolosha batteriga, marka xaqiiqda, kaliya ay waxyeello u geysato. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waxyaabo ka reeban, sida Greenify iyo AccuBattery.
Isku day labada dalabba.
4. Isticmaal hababka badbaadinta beytariga
Maalmahan, dhammaan taleefannada casriga ah ee Android waxay leeyihiin hal ama kabadan noocyo batteri ah. Jidadka, moodooyinka leh muujinta OLED waxay caadi ahaan leeyihiin qaab fudud oo fudud, halkaas oo interface dhan uu noqon doono mid gebi ahaanba madow, iyada oo aan marin loo helin codsiyada, kaydinta ugu badan.
Si kastaba ha noqotee, haddii aad rabto inaad sii waddo inaad haysato taleefanka gacanta casriga ah halkii aad ka isticmaali lahayd Nokia 3310, macno badan ayey kuu leedahay inaad isticmaasho habab dagaal yaree. Kaas oo qayb ka noqon doona curyaaminta hawlihii asalka ahaa, iyo sidoo kale u adeegistii, dardargelinta tooska ah ee saaxiriinta IA, iwm…
5. Hadaad haysatid telefishanka casriga ah ee OLED, isticmaal oo ku xad-gudub ‘Madowga’
Maalmahan, taleefanka casriga ah ee la soo galaya shaashadda LCD-ka ayaa noqdey mid naadir ah, sidaasoo kale caan ku ah qolalka OLED. Taasi waxay dhahday, haddii aad dhacdo inaad leedahay shaashad noocaas ah, isticmaal waxkastoo Madoow ah. Haddii aadan aqoon, muuqaalka gebi ahaanba madow, pixels-ka shaashadda ku jira ayaa gabi ahaanba xirmi doona, taas oo sida iska cad kaa caawin doonta inaad keydiso awoodda bateriga.
Ka sokow, maxay kula tahay waxaas oo dhan? Ma haysaa talooyin dheeri ah? Nala wadaag aragtidaada fikradaha hoose!